Ururka Haweenka Bari oo soo dhaweeyay Magacaabista Wasiirka Amniga PL+Dhageyso – SBC
Ururka Haweenka Bari oo soo dhaweeyay Magacaabista Wasiirka Amniga PL+Dhageyso
Ururada Haweenka gobolka Bari ayaa siweyn u soo dhaweeyay xilka cusub ee Maanta loo dhaariyay Wasiirka Amniga Dowlada Puntland Col Khaliif Ciise Mudan .
Waxa ay sheegeen Haweenku in siweyn ay ugu hambalyeynayaan wasiirka Cusub ee Amniga Khaliif Ciise Mudan ayna siweyn u soo dhaweynayaan uguna boorinayaan waxqabad iyo howl wacan.
Maryan Maxamed Xasan (Maryan Guduudo) waa gudoonka ururka Haweenka gobolka Bari waxayna iyadoo la hadleysa SBC International Sheegtay in ka urur haween ahaan ay soo dhaweynayaan wasiirka cusub islamarkaana ay sida ugu haboon ay ula shaqeyn doonaan.
Waxay intaasi raacisay Maryan Guduudo in Xilka loo magacaabay uu wasiir Khaliif Ciise uu yahay mid adag islamarkaana ku soo aaday xili adag loogana baahanyahay Karti loogaga baxo, iyadoona sheegtay in Khalif Ciise Mudan uu leeyahay Kartidaasi.
Waxay sheegtay in xilka uu yahay Meerto maaliba uu nin qabanayo wasiirkii hore ee Amnigana Yuusuf Axmed Kheyr ay soo dhaweynayaan xilka loodhiigay.
“Khaliif Ciise Mudan Waan naqaan, waa nin dalka Sharaf ku leh, waxaanna rajeyneynaa in uu noqdo kii dalka ka saari lahaa Marxalada adag ee lagu jiyo” ayay tiri Maryan Guduudo. Link hoose ka dhageyso hadalka Gudoomiyaha.
Si kastaba ha ahaatee Bulsha weynta reer Puntland ayaa siweyn u soo dhaweynaya xilka loomagacaabay Khaliif Ciise Mudan oo isagu maanta loo dhaariyay xilkaasi.